FINOANA SY BAOLINA LAVALAVA : Mitantara ny naha tompondakan’i Afrika sy ny sedra niainan’ny Maki i Berthin Zoto
Andro vitsy nialoha ny famaranana ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika tamin’ny 2012 izay nihaonan’i Madagasikara sy Namibia dia nisy iray tamin’ireo mpilalao malagasy nanentana ny mpiara-milalao aminy sy ny mpanazatra hoe : “tsara raha mandeha mandro eny Ambatondradama, avaratr’Ambohimanga isika”. 2 décembre 2021
Nisy mpilalao iray nilaza hoe izaho tsy hanao izany, i Berthin kosa nilaza hoe tsy afaka miakatra eny fa marary tongotra vokatry ny goty. Nisy mpilalao iray nilaza taminy hoe, andao fa miara-mifampitantana eny isika ry “Ramaître”. Dia raikitra tokoa ny dia, ilay mpilalao iray nilaza tsy hanao, navela teny ambany fa ny sisa kosa samy nandro daholo dia niara-niverina avy eo. Tonga ny lalao famaranana, nandresy tamin’ny isa 57 noho 54 ny Makis.
Fampirantiana ny tantaran’ny baolina lavalava
Efa roa volana sy tapany izao no nanaovan-dRafalimanana Joséph Berthin, fantatry ny maro amin’ny hoe Berthin Zoto fampirantiana ny tantaran’ny baolina lavalava malagasy sy ny tantaram-pirenena etsy amin’ny Tahala Rarihasina Analakely. Amin’io herinandro ho avy io no hifarana tanteraka izy ity (26 novambra). Hatreto, manodidina ny zato isan’andro no tonga manovo fahalalana etsy amin’ny Tahala Rarihasina, liana amin’ny tantaran’i Madagasikara izay mifamatotra be dia be amin’ny tantaran’ny baolina lavalava. Satria tsy mandeha irery izany fa raha miresaka baolina lavalava dia voaresaka ihany koa ny tantaram-pirenena amin’ny ankapobeny. Tsy taranja iray irery no hita taratra ao fa ny fitaingenan-tsoavaly, ny fanorona, ny tenisy, ny tolona, ny moraingy, ny baolina kitra samy voaresaka ao avokoa.
Tsodrano sy fandroana nampandresy ny Maki ?
Fa izay nahaliana anay omaly nandritra ny fifampiresahana tamin’i Berthin dia ny baolina lavalava sy ny finoana. Tsy mamaly avy hatrany i Berthin rehefa anontaniana fa miverina any amin’ny tantara hatrany izy ary milaza trangan-javatra iray. Anisan’ny nambarany, ohatra, iny naha tompondakan’i Afrika antsika tamin’ny 2012 iny izay nilazany fa mpilalao iray tao amin’ny Makis no nanentana hoe andao mba handro eny Ambatondradama. Iray no nandà fa ny sisa nandro avokoa ary iny nivoaka nandresy iny ny ekipam-pirenena malagasy.
Nialoha an’io koa nefa, nambarany fa nisy atleta mpikatroka atletisma avy any Atsimo Andrefana taraiky teto an-dRenivohitra fa tsy ampy saran-dalana sady lany vatsy ; nanampy ara-tsakafo io atleta io ny Makis satria izay masaka tao dia niaraha-nihinana. Tsy nanome vola azy ny Makis, hoy i Zoto, fa nanome sakafo azy kosa. Fa nialoha ny lalao famaranana no nandaozany ny Renivohitra, tamin’io efa voafatotra teny ambony fiara avokoa ny entany no niverina kely izy nisaotra ny Makis tamin’ny soa nataon’ireto farany azy, tamin’izay dia nambarany fa handresy ny Makis saingy hananosarotra tokoa. Dia iny nifandritarita iny tokoa, hoy Berthin, fa saika sahala, sahala hatrany ny isa fa tany amin’ny farany vao nisy an’iny baolina voatsindry farany iny nampivoaka antsika ho mpandresy. Trangan-javatra no tantaraiko, hoy indray izy, omaly fa izaho tsy afaka mitompo teny fantatra hoe, ilay fandroana teny Ambatondradama no nitondra vintana na ilay tsodranon’ilay atleta avy any Atsimo Andrefana notombanana ho manana hery miafina tokoa no tanteraka fa ny fiomanana sy ny fanazaran-tena dia samy natao avokoa tamin’ireo karazam-pifaninanana natrehina fa nisy fotoana nandresy ary nisy fotoana tsy nahomby.
Tokony nifady kisoa ?
Anisan’ny nambarany ny tamin’ny 2014, mbola notanterahina ihany ny fandroana teny Ambatondradama saingy rehefa hariva avy eny, samy tsy nisy nahatadidy fa dia nankafy ny sakafo, saosisy ny laoka. Teo am-pihinanana samy nankafy fa taorian’io vao nahatsiaro hoe sao misy kisoa ary iny laoka iny. Ny alin’iny dia toa nandry tsy lavo loha. Nony maraina, ny dadan’ny mpilalao iray no nindaosin’ny fahafatesana, afaka herinandro, ny zokin’io mpilalao io indray no nodimandry. Nandeha ny lalao saingy tsy nahita fandresena. Noho ilay saosisy nisy henan-kisoa ve ? Tsy fantatro, hoy i Berthin, fa izay ny tantara.
Mifoka rongony ve ny mpilalao rugby ?
Mialoha ny hidirana amin’ity lafiny ity dia nanontaniana ny momba ny hoe manao fanafody gasy ve ny mpilalao rugby malagasy i Berthin. Mbola ny tantara ihany no nitodihany ary nilazany trangan-javatra. Mpilalao lohalaharana telo no nolazainy, ny roa teo amin’ny sisiny nambarany fa nanana ny mpitaiza azy, ny iray teo afovoany nandeha tamin’ny heriny tenany tsotr’izao, tapitra ny lalao, naratra be ny tarehin’ilay teo afovoany fa ilay roa lahy teo amin’ny sisiny tsy naninon-tsy naninona. Tetsy amin’ny Malacam fony nohavaozina ny kianja dia nahitana levenan-javatra betsaka teo amin’ny tsatoby. Izany hoe, izay klioba nilalao dia samy nandevina zavatra tao, nisy Ramatoa mpikopaka lamba mena, hoy hatrany i Zoto, tamina klioba iray rehefa io klioba io no milalao. Misy mpilalao sahirana rehefa handray baolina fa manjary roa ny baolina hitan’ny masony dia tsy hitany izay hosamborina. Nahazo anarambositra hoe i Ballon double moa io mpilalao io noho izany.
Ary farany, nisy mpilalao rehefa mankany aminy ny baolina ka handeha hosamboriny dia vato "moellon" no tazany ka naleony nialana. Zava-misy teo amin’ny tantaran’ny baolina lavalava avokoa izany. Taty aoriana anefa, iaraha-mahita sy mandre fa mihira hiram-pivavahana ny Makis, toy ny hoe "Olombelona aho Tompo" sy ny hoe "Tsofy rano tsara re" raha "sûre ry tary fa lasa izahay" no fihira tany aloha. Etsy an-kilany, misy ilay boribory fanaon’ny mpilalao, mivavaka alohan’ny fanombohan’ny lalao, aorian’ny hiaka indraindray. Resa-pinoana avokoa ireny.
Fa momba ny hoe mifoka rongony sa tsia ny mpano baolina lavalava dia ny tantara hatrany no nitodihan’i Berthin. Tany La Réunion, tsy navitrika ny mpilalao Malagasy tanatina fanazaran-tena, nifampiresaka ny mpitarika ny amin’izay mety ho antony, tamin’izay no nisy nitondra sosokevitra hoe "tsy ampy môly". Natao izay hahitana, nisy mpilalao notondrotondroina hoe ity sy ity sy ity mankanesa aty. Naseho azy ireo hoe inty ilay zavatra. Avy hatrany dia nisy mpilalao nihoraka hoe vao aty amin’ny dimy metatra izay dia efa mitsoraka mamono baolina. Notanterahina ny lalao, hoy hatrany i Berthin, baolina entin-tanana telo miainga avy any amin’ny tsatoby andaniny tsy mijanona raha tsy maty.
Alika no miandry eny an-tseranam-piaramanidina
Taty aoriana anefa, notezainy hiala tsikelikely tamin’izany ireo mpilalao, indrindra fa hoe tsy afaka mitondra an’ireny rehefa ho any ivelany fa alika no miandry eny an-tseranam-piaramanidina ka hanao inona rehefa tratra, ho afa-baraka ny Firenena nefa vokatry ny fiankinana tsy ho afaka hanao na inona na inona rehefa tsy misintona kely. Farany hody maina hatrany. Dia nofaranany amin’ny hoe, izay any an-takonana no asa fa ny zava-misy aloha, mitaiza ny boay kely tsy handray zava-mahadomelina ny baolina lavalava fa foano ange io taranja io fa ho rakotra mpifoka môly ny tanàna. Io no aroriaka, arofanin’ny toetra ratsy, hoy indray izy fa raha tsy io, ho ratsy lavitra noho izao ny zava-misy.